Diyaarad sidday agab looga hortago Fatahaadda oo gaartay Baladweyne+Sawirro | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Diyaarad sidday agab looga hortago Fatahaadda oo gaartay Baladweyne+Sawirro
Diyaarad sidday agab looga hortago Fatahaadda oo gaartay Baladweyne+Sawirro
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta udirtay diyaarad siday agab loogu talagalay in caro tuur loogu sameeyay goobaha laga cabsi qabo inuu wabiga shabeellle fataahaad uu ka sameeyay ee Magaalada Baladweyne .
Diyaaradaqan siday agabka ayaa goordhawey caga dhigay garoonka diyaaradaha Ugaas khaliif ee Magaalada Baladweyene ee Xarunta Maamulka Gobolka Hiiraan.
Marka laga tago agabka waxaa diyaarada la socday Masuuliyiin ka tirsan Xafiiska Ra’isulwasaaraha dalka Xasan Cali Khayere waxaana ka horeysan diyaar kale oo ay Dowladda Gaarsiisay todobaadkii lasoo dhaafay iyo wafdi balaaran oo qiimeyn ku soo sameeyay .
Wabiga shabeelle ayaa Sanadkii 2018 Fatahaad qasaaro geystay ka sameeyay Magaalada baladweyne iyadoo ay ku bur bureen nolosha dad badan oo xoogsato ahee ku nool Magaalaadasi waxaase markale soo wajahday cabsi xooggan ka dib markii uu fatahaad ka sameeyay qeybo ka mid Magaalada .
Dowladda Soomaaliya ayaa xoogga saareyo sidii wax loga qaban lahaa xaaladaha ka taagan dalka iyadoo muruq iyo maalba layskugu geynayo in laga hortago qasaaro ka dhasha wabiga ee Magaalada Baladweyne.
Previous articleMadaxweyne Waare oo gaaray Magaalada Baladweyne
Next articleMaamulka Dhuusamareeb oo Amarro ka soo saaray dhulalka sharci darada ee Magaalada